ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းများ – Gentleman Magazine
ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်စွမ်းပါပဲ။ အနှောက်အယှက်များလှတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အလုပ်ကို ဦးစားပေးနိုင်တဲ့သူက အောင်မြင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အလုပ်လုပ်တာရပ်ပြီး ဘဝမှာ နေပျော်အောင် နေဖို့လဲလိုပါတယ်။
လုပ်စရာတွေ၊ အလုပ်တွေကိုပဲ အမြဲစဉ်းစားနေတာဟာ သင့်ကိုယ်သင် စက်ရုပ်တစ်ခုလို ပုံသွင်းလိုက်ခြင်းပါ။ အခက်အခဲတွေကို စွန့်စားခန်းအနေနဲ့ ပြောင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကောင်းမြင်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေဟာ များပြားလှပါတယ်။
၂. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် စားပါ
လူတော်တော်များများဟာ တစ်သက်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုပဲ ရှိမှာကို သတိမထားမိတတ်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လူနေမှုပုံစံကလဲ ခန္ဓာကိုယ်ကို မျက်နှာသာ မပေးပါဘူး။ အဲဒါတွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့သေချာတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားပေးခြင်းပါပဲ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် စားပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဖို့ဆို လေ့ကျင့်ခန်းလဲ လုပ်ပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ကိုယ်စိတ် နှစ်ခုလုံးအကျိုးရှိစေပါတယ်။ မပျင်းပါနဲ့။
ဘဝတွေဟာ ဆက်နွယ်နေကြတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် စိတ်ပူနေတတ်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လာမယ့်အလုပ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နီပေါမှာ ငလျင်လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လိုက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့။ မတတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် မပူပန်ပါနဲ့တော့။ အချိန်ကုန်ပါတယ်။
ခုခေတ်မှာ ဉာဏ်သုံးပြီး လုပ်တာက အလုပ်ကြိုးစားတာထက် ရေပန်းစားပါတယ်။ ဉာဏ်သုံးတာက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချောချောမွေ့မွေ့ ရှိပေမယ့် ကြီးကြီးမားမားအလုပ်ဆိုရင် ကြိုးစားမှ အောင်မြင်မှုရဖို့ သေချာမှာပါ။
ခုခေတ်မှာ ဟာသကားတွေ အငြိမ့်တွေ အရမ်းလူကြိုက်များနေတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ ရယ်ခြင်းဟာ စိတ်ပူပန်ခြင်းကို ပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ရယ်စရာတွေ့ရင် အားရပါးရ ရယ်လိုက်ပြီးတော့ ပူပန်မှုတွေ လွင့်ပါးသွားမှာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
အိပ်ချိန်ကောင်းကောင်းထားဖို့ ဘယ်လိုပြောပြော၊ တော်တော်များများဟာ ဆိုရှယ်မီဒိယာနဲ့ ဂိမ်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ အိပ်ချိန်ကိုစတေးနေကြဆဲပါ။ အဲဒါက စိတ်ညစ်ညူးစေနိုင်ပြီး အလုပ်ချိန်မှာ နိုးနေဖို့ ကော်ဖီ တစ်နေ့လုံး သောက်နေရပါတယ်။ အဲဒိ သံသရာက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ဖုန်းကို ဝေးဝေးထားပြီး ဒီညပဲ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်လိုက်ပါတော့။
ဘဝမှာ ပြျောရှငျအောငျမွငျဖို့ နညျးလမျး ရ သှယျ
လူတဈယောကျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျဆိုတာ သူ့ရဲ့ အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိ အသုံးခနြိုငျစှမျးပါပဲ။ အနှောကျအယှကျမြားလှတဲ့ခတျေကွီးမှာ အလုပျကို ဦးစားပေးနိုငျတဲ့သူက အောငျမွငျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈလမှောတော့ အလုပျလုပျတာရပျပွီး ဘဝမှာ နပြေျောအောငျ နဖေို့လဲလိုပါတယျ။
လုပျစရာတှေ၊ အလုပျတှကေိုပဲ အမွဲစဉျးစားနတောဟာ သငျ့ကိုယျသငျ စကျရုပျတဈခုလို ပုံသှငျးလိုကျခွငျးပါ။ အခကျအခဲတှကေို စှနျ့စားခနျးအနနေဲ့ ပွောငျးပွီးစဉျးစားကွညျ့ပါ။ အကောငျးမွငျခွငျးရဲ့အကြိုးတှဟော မြားပွားလှပါတယျ။
၂. ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျ စားပါ
လူတျောတျောမြားမြားဟာ တဈသကျမှာ ကိုယျခန်ဓာတဈခုပဲ ရှိမှာကို သတိမထားမိတတျပါဘူး။ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့လူနမှေုပုံစံကလဲ ခန်ဓာကိုယျကို မကျြနှာသာ မပေးပါဘူး။ အဲဒါတှကေို ဆနျ့ကငျြဖို့သခြောတဲ့နညျးလမျးကတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျအောငျ စားပေးခွငျးပါပဲ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျ စားပေးရုံနဲ့ မလုံလောကျသေးပါဘူး။ အကောငျးဆုံးခန်ဓာကိုယျရဖို့ဆို လကေ့ငျြ့ခနျးလဲ လုပျပေးရပါမယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော ကိုယျစိတျ နှဈခုလုံးအကြိုးရှိစပေါတယျ။ မပငျြးပါနဲ့။
ဘဝတှဟော ဆကျနှယျနကွေတော့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ဆိုငျဆိုငျ မဆိုငျဆိုငျ စိတျပူနတေတျကွပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ လာမယျ့အလုပျအတှကျပဲ ဖွဈဖွဈ၊ နီပေါမှာ ငလငျြလှုပျတာပဲဖွဈဖွဈ အကုနျလိုကျပွီး စိုးရိမျပူပနျမနပေါနဲ့။ မတတျနိုငျတဲ့ ကိစ်စတှအေတှကျ မပူပနျပါနဲ့တော့။ အခြိနျကုနျပါတယျ။
ခုခတျေမှာ ဉာဏျသုံးပွီး လုပျတာက အလုပျကွိုးစားတာထကျ ရပေနျးစားပါတယျ။ ဉာဏျသုံးတာက မွနျမွနျဆနျဆနျ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ ရှိပမေယျ့ ကွီးကွီးမားမားအလုပျဆိုရငျ ကွိုးစားမှ အောငျမွငျမှုရဖို့ သခြောမှာပါ။
ခုခတျေမှာ ဟာသကားတှေ အငွိမျ့တှေ အရမျးလူကွိုကျမြားနတော အလကားမဟုတျပါဘူး။ ရယျခွငျးဟာ စိတျပူပနျခွငျးကို ပြောကျစနေိုငျပါတယျ။ ရယျစရာတှရေ့ငျ အားရပါးရ ရယျလိုကျပွီးတော့ ပူပနျမှုတှေ လှငျ့ပါးသှားမှာကို စောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။
အိပျခြိနျကောငျးကောငျးထားဖို့ ဘယျလိုပွောပွော၊ တျောတျောမြားမြားဟာ ဆိုရှယျမီဒိယာနဲ့ ဂိမျးတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုအောကျမှာ အိပျခြိနျကိုစတေးနကွေဆဲပါ။ အဲဒါက စိတျညဈညူးစနေိုငျပွီး အလုပျခြိနျမှာ နိုးနဖေို့ ကျောဖီ တဈနလေုံ့း သောကျနရေပါတယျ။ အဲဒိ သံသရာက ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ ဖုနျးကို ဝေးဝေးထားပွီး ဒီညပဲ အိပျရေးဝဝ အိပျလိုကျပါတော့။
Previous: ယမကာဝိုင်းတို့အတွက် သိတတ်ရမည့် အချက်များ
Next: ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ၄ ချက်